Manginy loatra i Washington DC! Mahatsiaro ho voaro aho nefa matahotra!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manginy loatra i Washington DC! Mahatsiaro ho voaro aho nefa matahotra!
Ny tranoko dia telo minitra miala ny White House mandritra ny 30 taona. Nandray ireo mpitsidika avy amin'ny kontinanta rehetra aho.
Vao avy nandeha an-tongotra aho. Milamina ny tanànako, mangina loatra. Mampatahotra izany, hoy i Maricar Donato, maherifo amin'ny fizahantany ary mpitari-dia ao Washington DC.
Vonona hipoaka ve ny tanàna Washington DC? Tsy dia toa izao ny androany, fa ny tanàna renivohitra Etazonia Washington DC kosa mangina fotsiny. Karazana fahanginana misy fihenjanana be izany. Miala amin'ny tanàna ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump amin'ny fanokanana azy, miomana amin'ny tafio-drivotra ity tanàna ity.
"Ny vondrom-piarahamoninay dia toa tanàna misy ady ary toa an'i Afghanistan, Syria, na Iran", hoy i Maricar Donato. “Ity dia trano fiarovana tsy mbola hitako hatrizay.”
Telo andro talohan'ny fitokanana ny filoha voafidy Joe Biden sy ny filoha lefitra voafidy Kamala Harris ny Alarobia, maherifo amin'ny fizahantany Washington DC ary ny mpizahatany Maricar Donato dia nizara ny eritreriny androany eTurboNews
Marisa Donato dia 30 taona monina ao Washington DC. Tsy lavitra ny Trano Fotsy ny tranony.
“Voaro ny fefy manodidina ahy. Misy tobim-piarovana hatraiza hatraiza. Mila taratasy, ID ary antony tokony hahatongavanao ao amin'ny manodidina azy ianao. Ilay malaza Hotel Mayflower is fantatra fa misy hetsika lehibe mandritra ny fitokanana. Voafehy ny trano fandraisam-bahiny. ”
"Mahatsiaro ho voaro aho, nefa matahotra koa", hoy i Maricar Donato.
Maricar dia mpitari-dia amin'ny fizahan-tany any US Capital City. Ambasadaoro marika ho an'ny Federasiona manerantany mitari-dalana ary mitarika ny vondrona liana momba ny fizahan-tany ho an'ny mpitarika fizahan-tany ao amin'ny World Network Network.
“Tsy nanana mpizahatany izahay hatramin'ny nikaton'ity tanàna ity volana lasa izay. Nakatona daholo ny serivisy fizahantany, anisan'izany ny tranombakoka. Foana ny hotelinay. Nahay namorona fitsangatsanganana virtoaly izahay na niara-niasa tamin'ny LGBTQ sy ireo vondrona liana manokana amin'ny fanampiana amin'ny hetsika madinidinika. ”
Nahazo ny anaram-boninahitr'i aostraliana Maricar Donato, Filipiana-Amerikanina Maherifo momba ny fizahantany ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ho fanampiana hompizahatany mitaingina avy any Kamerona mody rehefa avy tafahitsoka ary tsy misy loharanom-bola mandritra ny volana maro.
Maricar dia naka sary sy horonan-tsary tao Washington DC androany, telo andro talohan'ny fitokanana.
Jereo ny tatitra nataony momba ny fomba fiomanan'i Washington DC amin'ny fanokanana tena hafa amin'ny 20 Janoary 2021
Maricar Donato mitatitra avy any Washington DC, Etazonia
Rahampitso alatsinainy 18 janoary amin'ny 2.00 ora tolak'andro no hankalazan'ny World Network Network ny fitokanana ny filoha voafidy Biden. Maricar Donato no hitarika ny hetsika. Izay rehetra ao amin'ny orinasam-pitsangatsanganana sy fizahantany dia afaka miditra sy mifanerasera amin'ny fotoana tena izy. kitiho eto misoratra anarana. Ho an'ny hetsika amin'ny ho avy dia tsidiho: www.worldtourismevents.com
NASA dia manao fitsapana ho an'ny iraka volana